इन्द्रेणीकि गायिका कल्पना दाहाललाई फेरी अर्को ठुलो बज्र:पात ! हेर्नुहोस् भिडियो सहित – Namaste Host
March 29, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on इन्द्रेणीकि गायिका कल्पना दाहाललाई फेरी अर्को ठुलो बज्र:पात ! हेर्नुहोस् भिडियो सहित
गायिका कल्पना दाहाललाई फेरी अर्को पिडा थपिएको छ। उनि दुखबाट बल्ल केहि थिरिएको थिईन तर केहि समय बित्न नपाउदै फेरी अर्को बज्रपात भएको छ। उनकी आमा फेरी अस्पतालको बेडमा जीवनको लडाई लडिरहेकी छिन।
लामो समय देखिको बिरामी उनि फेरी बिरामी भए पछि कल्पनालाई थप पिडा थपिएको हो। आजै कल्पना दाहाल दोहोरी च्याम्पियनमा आउदै छिन आजै उनि अस्पतालमा जानु परेको छ।पछिल्लो केही महिनायता सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित बनेको जोडी हो गायिका कल्पना दाहाल र प्रखर वक्ता रमेश प्रसाईंको । विशेषगरी टेलिभिजन कार्यक्रम इन्द्रेणीमा यो जोडीले दोहोरी गाइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक रुचाइयो ।
रमेश प्रसाईं दृष्टिविहीन हुनहुुन्छ । उहाँको बोल्ने शैली, ज्ञानलाई निकै रुचाइएको छ । पछिल्लो समय दोहोरी गाउन सक्ने कलाले झन् उहाँलाई थप चर्चामा ल्याइदियो । यतिकैमा अहिलेको साता यो जोडीको चर्चा झन् शिखर पुग्यो । गत मंसिर २२ गते रमेशले नन्दा सिंहसँगको तीन वर्षदेखिको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्नुभयो ।
विवाह समारोहमा पुग्नु भएकी गायिका कल्पनालाई धरानमा युट्युबरले निकै घेरेका थिए । उहाँलाई युट्युबर तथा सामाजिक सञ्जालबाट धो का दिएकै हुन् ? टेन्सनमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न निकै गरेको देखिन्थ्यो । अहिले रमेश बिहे गरेर आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको काँकडभित्तामा हुनुहुन्छ भने कल्पना इन्द्रेणी कार्यक्रमको टिमसँग कामको शिलशिलामा इलाम पुग्नुभएको छ ।
विशेषगरी गायिका कल्पना दाहाललाई अहिले दर्शक तथा श्रोताले अत्यधिक चिन्ने मौका पाए तापनि रमेशसँग नाम नजोडिँदै गायन क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नेपाली लोक तथा दोहोरी गीतको क्षेत्रमा दर्जनौं गीत गाउनुभएको छ । यस्तै प्रत्यक्ष दोहोरी भने धेरै नै गाउनु भएको छ । कल्पनाको विशेषगरी प्रत्यक्ष गाउने कलाको धेरैले सम्मान गर्छन् ।